မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်: အမည်များနှင့် ကံဇာတာ (၁၃၇၄ ခုနှစ်)
ပထမဦးစွာ မိမိတို့ရဲ့ နာမည်မှာ နာမည်အရင်း စာလုံး (၀ါ) နာမည်ရဲ့ အစ စာလုံး နဲ့ …နာမည်ရဲ့ အဖျား စာလုံး (၀ါ) နာမည် အဆုံးစာလုံး တို့ကို ခွဲခြား သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျော်သက်နိုင် ဆိုတဲ့ နာမည်မှာ ……
နာမည် အရင်း စာလုံးဟာ ကျော် (တနင်္လာနံ) ဖြစ်ပြီး …နာမည် အဖျားစာလုံး ဟာ နိုင် (စနေနံ) ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို ခွဲခြားပြီး တင်ကြိုသိရှိထားရပါမယ်။
ယခုနှစ် ပက္ခတွဲ နာမည်ရှင်များ
(၁) တနင်္ဂနွေ + အင်္ဂါ နာမည်ရှင်များ (အောင်စိုး ၊ စိုးစိုးဦး၊ စန်းမြင့်အေး ၊ ဇော်ဇော်အောင်)
(၂) တနင်္လာ + တနင်္လာ နာမည်ရှင်များ(ကျော်ကျော် ၊ ကိုကို ၊ ခိုင်ခိုင်၊ ငြိမ်းချမ်းခင်)
(၃) ကြာသာပတေး + သောကြာ နာမည်ရှင်များ (မြတ်လေးသွယ်၊ သီတာမြင့်၊ သဇင်ဖြိုး)
(၄) စနေ + ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟု နာမည်ရှင်များ (တင်ရွှေ၊ ရဲမြင့်ထွန်း၊ ယုယုနိုင်၊ ၀င်းတင့်)
ပက္ခတွဲ နာမည်ရှင်တွေဟာ သည်တစ်နှစ်မှာ …. ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမယ့် ကြီးကြီးမားမား ကဏ္ဍတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ် ဆိုတာ သိရှိထားရပါမယ်။ ကျန်းမာရေးလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ စီးပွားရေး ၊ အိမ်ထောင်ရေးလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ အချစ်ရေး ၊ ပညာရေးလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ အဓိက ကတော့……ကိုယ့်နာမည်က ပက္ခတွဲနာမည်တွေ ထဲပါနေပြီ ဆိုရင် နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း ရုန်းကန်ရမယ့် ကံအခြေအနေတွေ ပေါ်ပေါက်လာတော့တာပါပဲ။
ပက္ခတွဲနာမည် … လေးမျိုးလေးစားမှာ ……………….
အထက်ပါ ပက္ခတွဲ နာမည်ရှင်တွေဟာ ….ယခုနှစ်ထဲမှာ ..
အသက်မွေးမှု တွင် ရန်အနှောက်အယှက်ပေါ်ခြင်း …
မင်းအစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ပေါ်ပေါက်ကြုံတွေ့ရတတ်ခြင်း
စပ်တူရှယ်ယာ ကဏ္ဍများတွင် တွဲရေးခွဲရေး ပြဿနာများ ကြုံတွေ့ရတတ်ခြင်း …
စသည်ဖြင့် ကဲ့သို့သော အခြေအနေများ ရင်ဆိုင်ကြရတတ်ပါတယ်။
အထက်ပါ ပက္ခတွဲ နာမည်ရှင်တွေကတော့ …
မေတ္တာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ….
စိတ်ထိခိုက်စရာ ကဏ္ဍများ ….
အိမ်ခြံမြေ ယဉ်ကား ဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းရမှုများ ….
သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ ….
မိခင်နှင့်ဆိုင်သော .. အခက်အခဲများ …ပေါ်ပေါက်ကြုံတွေ့ရတတ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ ပက္ခတွဲနာမည်ရှင်တွေကတော့ …..
ငွေကြေး နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ….
ငွေကြေးထားသို သိမ်းဆည်းမှု ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ….
ဆရာသမားနှင့် ဆိုင်သော အခက်အခဲများ …..
ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ …အခက်အခဲများ …
အထက်ပါ ပက္ခတွဲ နာမည်ရှင်များ အဖို့ …..
စကားပြောဆိုမှု ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ ….
ဘာသာပြန်ဆိုရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ …..
မှတ်ဥာဏ် နှင့် ဆိုင်သော အခက်အခဲများ ….
အလုပ်သမား ပြန်လည်ရရှိလိုရေး ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ …
လူမှုဆက်ဆံရေး အဖုအထစ်များ …
အတင်းအကျပ် တားမြစ်ခံရခြင်းများ …
စသည်ဖြင့်သော အခြေအနေများ ကြုံတွေ့ရတတ်ချိန်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေများဟာ ….. မိမိရဲ့ …နာမည်တစ်ခုလုံး အဆိုပါကဲ့သို့ ပက္ခမိနေချိန်မှာ အားအပြင်းဆုံး ရင်ဆိုင်ကြရတတ်ပြီး..၊ နာမည်တစ်ခုလုံး မဟုတ်ပဲ …နာမည်အရင်းစာလုံး သို့မဟုတ် နာမည်အဖျားစာလုံး သို့မဟုတ် မွေးနံတစ်ခုခု ပါဝင်နေရင်လည်း အဆိုပါကဲ့သို့ ပါဝင်နေသော ပက္ခတွဲက ဖော်ပြတဲ့ အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာကို ….အတိုင်းအတာတစ်ရပ်အထိ ကြုံတွေ့ ရင်ဆိုင်ကြ ရတတ်စမြဲပါ။
တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ပက္ခဆိုတာ ကံဆိုးခြင်းတော့ မဟုတ်ပါ။ ပြုပြင်ရမယ့် ကဏ္ဍ ၊ ပြန်လည် ထူမတ်ရမယ့် အခြေအနေ တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆိုင်ရာ ကံဇာတာရှင်များ အနေနဲ့ ….မိမိကြုံနေရတဲ့ ပက္ခအခြေအနေပေါ်မှာ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှား ပြုပြင်နိုင်မယ် ဆိုရင် …. အဆိုးကနေ အကောင်းကို ပြောင်းလဲ သွားနိုင်တာကို သတိချပ်ပါ။
နာမည်တစ်ခုလုံး အရင်း အဖျား ပက္ခမိနေသူတွေကတော့ ….ခက်ခက်ခဲခဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေက ပိုမို အင်အားပြင်းထန်နိုင်ပြီး … တောင်းနင်းမြောက်ထောင် ထိမ်းသိမ်းရခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေအချို့ ကိုလည်း ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဖို့ ကြိုးစားကြရပါမယ်။
ဒီလောက်ဆို ပက္ခတွဲ နာမည်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လုံလောက်ကောင်းပါရဲ့။ နာမည်အဖျားစာလုံး သက်သက်ကို ဆက်ကြပါစို့။
(၁) နာမည်အဖျားစာလုံး တနင်္လာနံ (က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င) ဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားသော အမည်ရှင်များ
ဥပမာအားဖြင့် ….(တင်နီလာခိုင်၊ မျိုးမျိုးကျော်၊ မိုးဇော်ကို၊ ထူးသစ်ငြိမ်း…စသည်)
အထက်ပါကဲ့သို့သော အမည်ရှင်တွေအဖို့ လက်ရှိရောက်ဆဲ ခုနှစ်ထဲမှာ ရင်ဆိုင်နေကြရတတ်တာကတော့ …….
ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား ၊ မိခင် ၊ ကျောင်း/သင်တန်း၊ ယဉ်ကား ၊ ခြံမြေ ၊ ရေ နဲ့ ပတ်သက်သော အခက်အခဲများပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ချောင်းဆိုးရင်ကျပ် အဖြစ်လွယ်ဆုံးကာလတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ တစ်ချို့လည်း ဒါလေးများကွာဆိုပြီး ရယ်သွမ်းသွေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်ချောင်းဆိုး ရင်ကျပ် ဖြစ်လာရင် ခံစားရတဲ့ ဆင်းရဲ ကို သိရင် ….ကြိုတင် ကာကွယ်သတိပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ ပေါ်ပေါက်လာတတ်သလို … ၊ စိတ်ထိခိုက်စရာလေးတွေလည်း မကင်းရတတ်ချိန် ရောက်နေတယ်ဆိုတာ သတိပြုပါ။ တွေ့ရသမျှကလည်း ဒီတစ်နှစ်ထဲမှာ အဆိုပါကဲ့သို့သော အမည်ရှင်တွေအဖို့ ….. တစ်ချို့က အမေကိုလွမ်းလို့ ငို ၊ တစ်ချို့က ဘတ်စ်ကား အဆင်မပြေလို့ ငြီး၊ တတ်နိုင်တဲ့သူတစ်ချို့လည်း ကားဝယ်စီးမိရာက အဆင်မပြေဖြစ်၊ ခြံလေးမြေလေး တက်ဈေးရမလား ဖမ်းဝယ်မိရာက ဒုက္ခရောက်သူကရောက် ၊ ကြိုမသိထားတော့လည်း တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်မယ့် အချိန်မှာမှ စစ်ထဲဝင်မိသလိုမျိုး …ကြုံကြိုက်ကြရပြန်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ ..အဆိုပါကဲ့သို့သော နာမည်ရှင်တွေအဖို့ ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ….
သည်တစ်နှစ်လုံး ရေကုသိုလ်ပြုပါ။ ရေသတ္တ၀ါ ဘေးမဲ့လွှတ်ပါ။ အစာကျွေးပါ။ ကြီးကဲသူများကို ဖျော်ရည် ကပ်လှုပူဇော်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် မွေးမိခင်ကြီးကို ခြေဆုပ်လက်နယ်ပြုပါ။
ခရီးသွားလာနေစဉ် ဒါနပြုပါ။ အရေးကြီးသော ကဏ္ဍများ မှန်သမျှကို လပြည့်နေ့ နဲ့ လပြည့်နားနီးသော ရက်များ မှာ မလုပ်မိအောင် ရှောင်ကျဉ်ပါ။ တနင်္လာနေ့ မှာ လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း ရှောင်ပါ။
တနင်္လာနေ့ဟာ မိမိတို့ရဲ့ ဦးတည်ချက် ၊ ရည်မှန်းချက် ….ကံဇာတာအခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို သွေဖီ ဆန့်ကျင်မှု ပြုနေတယ် ဆိုတာ သတိပြုနိုင်ကြပါစေ။
(၂) နာမည်အဖျားစာလုံး အင်္ဂါနံ ( စ၊ ဆ။ဈ၊ ဇ၊ ည) ဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားသော အမည်ရှင်များ
ဥပမာအားဖြင့် ..၊ ဘုန်းဝေဇော်၊ ကျော်လွင်စိုး၊ မိုးမိုးဇင်၊ သဇင်၊ နီလာဆွေ ..စသည်..
အထက်ပါကဲ့သို့သော နာမည်ရှင်များ …အဖို့တော့ သည်တစ်နှစ်ဟာ … မြွေမသေ တုတ်မကျိုး အခြေအနေမျိုး တွေ ကြားမှာ ဖြတ်သန်းရတတ်ချိန်ပါပဲ။ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေ၊ ဂိမ်းကစားခြင်းတွေ၊ ကစားပျော်ပါးမှု တွေလည်း ကြုံတွေ့ရတတ်ချိန်ပါ။ အမြဲတမ်း ထက်သန်နေတတ်တဲ့ လုံ့လတွေဟာ သည်တစ်နှစ်ထဲမှာ လျော့ကျလာပါမယ်။ အမြဲတမ်းတိကျတဲ့ စနစ်နဲ့ အချိန်ကို တန်ဖိုးထားတတ် သူတွေတောင် …သည်တစ်နှစ်တော့ အချိန်ကို လေးစားမှု နဲပါးလာတတ်ပါတယ်။ အချိန် + ပျော်စရာ ဆိုတဲ့ ကာလပါပဲ။ တနည်းအားဖြင့်တော့ အချိန်ဆိုတာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ကစားနည်းတွေ နဲ့လည်း ပျော်မွေ့စရာကာလ ဖြစ်လာပါတယ်။
အားနဲချက်ကတော့…သည်တစ်နှစ်မှာ အထက်ပါ အမည်ရှင်တွေအဖို့ … အထက်အကြီးအကဲ၊ အုပ်ထိန်း သူများ ၊ အာဏာပိုင်များ နဲ့ အဆင်မပြေ ဖြစ်လွယ်ကြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးဝါးသောက်သုံးမှုကိုလည်း ဂရုပြုရမယ့် ကာလဖြစ်ပြီး ….ဆေးမှားလွယ် အစားမှားလွယ်တတ်တာကိုလည်း သတိပြုရပါမယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့ မှာ မိမိတို့ရဲ့ အရေးကြီးသော ကဏ္ဍများကို စတင် အကောင်ထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ခြင်း မျိုး ရှောင်ရှားသင့်ချိန်ဖြစ်ပြီး…၊ နေမွန်းတည့်ချိန်များမှာ အရေးကြီးသော လက်မှတ်ရေး ထိုးခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခြင်း ၊ လုပ်ငန်းစတင်ခြင်း …စသည်ဖြင့် မပြုမိဖို့လိုပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအဖို့ ….မောရသုတ်တော်ကြီးကို တစ်နှစ်လုံး မကြာခဏ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးသင့် ချိန်လည်း ဖြစ်ပါတော့တယ်။
ဆောင်းပါးဒုတိယတွဲမှာ ကျန်နေသေးတဲ့ နာမည်ရှင်တွေကို ဆက်ပါမယ်။